Ikhamera Esebenzisa Umzimba: Amasu Azosiza Ezibhedlela | Izixazululo ze-OMG
Lawa madivaysi ahlinzeka ngokuphendula okukhulu ekusebenzeni phakathi kweqembu lama-ambulensi neziguli. Abezimo eziphuthumayo bahlala bezibeka ezimweni ezinzima neziyingozi. Amakhamera asiza ukusebenzisana nabalingani bamaphoyisa ukuqinisekisa ukuthi izinyathelo zithathwa ngokulandela noma yiziphi izenzo zobugebengu ezenziwa ngabasebenzi. Amakhamera omzimba asiza lapha ngokunikela ngokungakhethi nokuvikelekile kwevidiyo ezenzakalweni ezihlangane ngaphambili. Ukufakwa kwevidiyo kugcinwa ekhadini elivikelekile le-SD elingasetshenziswa kamuva njengobufakazi obuvumayo enkantolo.
Okuqoshwe kula makhamera kungenzeka kusetshenziselwe ukuqeqesha nokuqeqesha, kanye nokusiza izinqubo zezokwelapha ezenziwe kahle. Amaqembu e-ambulensi angakwazi ukuzuza ngokufanayo ngokubuyekezwa okurekhodiwe ukuthuthukisa ukuphendula kwabo ezimweni nasekutholeni impendulo yesikhathi sangempela ukusiza ukwenza izinqumo ezisindisa impilo. Amakhamera nawo angasetjenziswa njengokwenza ukuqeqeshwa kwabasebenzi abasebasha bese ubakhombisa izinqubo ezikhethekile nokuthi kufanele baphendule kanjani kuzo.
Abezimo eziphuthumayo babhekene nokuhlukumezeka ngamazwi nangokomzimba ngenkathi besemsebenzini, futhi la makhamera ayasiza ukuthola labo bantu. Amakhamera agqokwa ngomzimba ayindlela edumile ekuvikelweni kwabasebenzi ngaphambili. Abasebenzi bezimo eziphuthumayo banikela izimpilo zabo ukuvikela nokunakekela abantu ngezikhathi zabo ezinesidingo esikhulu kakhulu futhi kunoma ngubani wabo ukuba ngaphansi kolaka noma udlame alunangqondo ngokuphelele.
Sinikezela ngedivaysi, inzwa, ama-trackers, ukuqaphela i-tele-technology, ubuchwepheshe obungenawaya kanye namadivayisi wokulandela ekhaya wesikhathi sangempela kanye nokusebenza kwabo kodokotela
Amakhamera omzimba anamandla okuthuthukisa ukusebenza nokwaneliseka kuzo zonke izinhlobo zemisebenzi. Uma kwenzeka kufundiswa nabasebenzi bezokuphepha, ngokwesibonelo, amakhamera akhombisile ukuba nethonya kumalungu omphakathi anolaka. Lokhu-ke kuthuthukise nokweneliseka komsebenzi ngokwenza abasebenzi bazizwe bephephe emsebenzini wabo. Ngemuva kokuhlolwa emawadini ezempilo yengqondo, uhulumeni ufuna abosizo lokuqala basebenzise amakhamera. Ngo-2014, ukusetshenziswa kwamakhamera agqoke umzimba ngabahlengikazi kwahlolwa kuqala ezigcemeni ezimbili eBroadmoor, isibhedlela sabagula ngengqondo esiphezulu eCrowthorne, eBerkshire. Le mibhalo ihlinzeka ubufakazi bokuxhasa ukushushiswa kulandela izigameko zodlame lapho nokuncipha okuncane kwezehlakalo zokuhlaselwa kwabasebenzi nakho kuphawuliwe. Ngaphezu kwalokho, kube "nokwehla okuphawulekayo ekuziphatheni okungahambisani nomphakathi kanye nolaka", ngokusho kokhulumela i-West London NHS Trust, ephethe iBroadmoor.
Ngaphezu kwalokho, amandla okusakazwa bukhoma kumakhamera avumela odokotela abakude nendawo ukunikeza izeluleko zezokwelapha kubahlinzeki bezimo eziphuthumayo abaya emacaleni alukhuni phansi, uma kunesidingo.
Izibhedlela zehlukile ezinseleleni zokuphepha eziqondene ngqo nezimboni ezithile ezihlanganiswe ngenhlangano eyodwa. Ngaphezu kwezindawo ezijwayelekile, izibhedlela zivame ukuba nezindawo zokudlela, izitolo zezipho, amakhemisi, amaseli abamba ukwelashwa kweziboshwa nezindawo zokwelashwa kwengqondo - konke kuveza izidingo zobuchwepheshe ezihlukile. Amadivayisi okuphepha okuphoqelelwa komthetho we-OMG eza ngobubanzi obukhulu ukufeza lezi zidingo ezahlukahlukene. Ukuqoshwa kwevidiyo, ukulawula ukufinyelela, ama-alamu, amakhamera agqoke umzimba, namanye amathuluzi kungasetshenziswa futhi kuhlanganiswe ndawonye ohlelweni lokuphepha esibhedlela.
Kodwa-ke, kubalulekile ukugcina engqondweni ukukhathazeka kokuphepha okungahambisana nobuchwepheshe obunjalo. Amalungu omphakathi ngokuvamile avumile ukuthi akhathazekile ngokuthi kungenzeka yini ukuthi umuntu ongagunyaziwe, umuntu wesithathu angathola imininingwane yakhe ngokusebenzisa amakhamera agugile omzimba. Baphinde bazwakalisa ukukhathazeka ngokuthi lokhu kungaholela kanjani ekubandlululweni okuzayo ngenxa yokudalulwa kwemininingwane yabo. Odokotela abaningi abavumelani nokuthi amakhamera omzimba azophazamisa ubudlelwano bodokotela neziguli kepha bakhathazeka ngokuphepha kwemininingwane yeziguli zabo. Kodwa-ke, umphakathi kanye nodokotela babekuvumela ukuqaliswa kohlelo lwamakhamera agqoke umzimba, behlola ukuthi izinzuzo ezingaba khona zidlula izingozi ezingaba khona. Iningi lomphakathi likholelwa ukuthi iziphathimandla kufanele zithole ukufinyelela okugcwele kwemininingwane kanti abasebenzi abahlengikazi, osokhemisi, abasebenzi baselabhoratri, kanye nabanye ochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo kufanele bakwazi ukufinyelela kancane.
Ikhamera Esebenzisa Umzimba: Amasu Azosiza Ezibhedlela igcine ukuguqulwa: Julayi 29th, i-2020 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4703 Ukubuka kwe-2 Namuhla